Myanmar Hot Singer, Jenny's Sexy Fashion @ Lazy Club Live In Korea | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Myanmar Hot Singer, Jenny's Sexy Fashion @ Lazy Club Live In Korea
Myanmar Hot Singer, Jenny with Sexy Strapless Golden Fashion Dress
Myanmar Singer, Jenny Performed for Lazy Club Live in Korea Concert
Here are some photos of Myanmar Hot Singer, Jenny while she was performing for Lazy Club Live in Korea Concert which was held on 21 September 2010 in Korea. Myanmar Singers; Thazin, Jenny, Chit Thu Wai, L Lone War, He' Lay and Khin Maung Toe performed for this concert together with Lazy Club Band. Myanmar Singer : Jenny
Photographer : Thu Thu Aung
Photos From Mmcpcommunity.net
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Lazy Club Live in Korea Concert ပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဂျင်းနီ ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ပါ။ ဒီပွဲမှာ Lazy Club နဲ့အတူ သဇင်၊ ဂျင်းနီ၊ ချစ်သုဝေ၊ Lလွန်းဝါ၊ ဟဲလေး နှင့် ခင်မောင်တိုး တို့ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ADVERTISEMENT
BoSeptember 22, 2010 at 12:25 PMadmin တွေ ကျန်းမာပါစေဗျာ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ jenny ပုံတွေကို ထပ်တင်ပေးလို့လေ video ပါရရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ သူက အဆိုတော်ပဲလုပ်တော့ အားမရဘူး အားပေးရတာ ရုပ် လည်းရှိ body က အပြန်စားဆိုတော့ သူ့ကိုကြည့် ပြီး ရေခဲရေ မြန်မြန်လာဟ ဒီမှာ hot လွန်းလို့ဟ original ကြီးဟ ဂလုReplyDeletekingSeptember 22, 2010 at 2:11 PMလန်းတယ်ဟေ. အယ်စတုန်းကြီးပါလား..ဟိဟိ..ဂလုReplyDeleteYaSeptember 22, 2010 at 4:35 PMငါအစ်မ တွေ ညီမတွေဆိုရင်တော့ သေဖို့ သာပြင်တော့ ဖင်လန်ပြီ ဝစိမ်းခတ်နဲ့ ရိုက်မှာ.....တော်တော်ပြချင်နေကျတယ် အဝတ်စားမပါဘဲရိုက်ပါလား တော်တော်ကြည့်ကောင်းမှာနော်ReplyDeleteTin NweSeptember 22, 2010 at 8:05 PMsnuff box twae kyi par bae larReplyDeleteLu Wa GyeeSeptember 22, 2010 at 10:22 PMဂျင်နီလေး တလုံးတခဲကြီးပါလား ရေလည်လန်းတယ် အားပေးတယ်ReplyDeleteWaiSeptember 23, 2010 at 9:27 AMOriginal !!! he he...I don't think so bro....ReplyDeleteDeathSeptember 23, 2010 at 9:29 AMဟဲ့ လခွက်.. ကိုရေခဲ၊ လူဆိုး၊ ကိုဘကြည်တို့ ဘယ်ပျောက်နေတုန်း။ဧကန်န သူကြီး ၂ လုံးပြူးစာ မိနေတယ်ထင်ပါ့။ကိုရေခဲတို့ မရောက်သေးတော့ ကောင်မလေးခမျာ အလတ်ကြီး ကျန်သေး။သူတို့ရောက်လာလို့ကတော့ အကုန်ပြောင်ပီသာမှတ်။ အဟီးပုံ. ပွကြီးReplyDeleteပွကြီးSeptember 23, 2010 at 9:40 AMကိုရေခဲတို့ သူကြီးတို့ရေ အစည်းအဝေးထိုင်မနေနဲ့။နောက်ကျရင် အရိုးတောင် မရပဲ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။အသားတွေက ပွကြီးဆီ ရောက်ကုန်လို့။အဟိReplyDeletekhayantharSeptember 23, 2010 at 11:26 AMချစ်ချင်စရာကြီးနော်။ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဘဲခံစားရတယ်။ReplyDelete`ကျော်September 23, 2010 at 2:58 PMဟုတ်ပ ကိုခရမ်းသားရယ် ကျွန်တော်ဒီလိုဘဲ... :PReplyDeletenaySeptember 23, 2010 at 8:03 PMgoodReplyDeletephyoSeptember 23, 2010 at 9:44 PMJenny ရယ်...အဲလောက်ဆို ကုန်ပြီထင်တယ် နော်... စိုင်းစိုင်း ပြောသလိုပဲ မေးတော့ မယ်..ငါ့အလှည့် ကဘယ်တော့လည် ... :PReplyDeleteရွာသားSeptember 23, 2010 at 9:50 PMသူကြီး အစည်းအဝေးမပြီးသေးဘူးတဲ့ ကိုပွကြီး ..သူကြီးကမှာလိုက်တယ် ..သူ့ အတွက် သီးသန့်ဖယ်ထားပေးပါတဲ့....ReplyDeleteShineSeptember 24, 2010 at 3:07 AMပေါင်လုံးကြီးတွေက ဘောလုံးသမားနဲ့ နင်လားငါလား သူ ၀လာပီReplyDeleteပွကြီးSeptember 24, 2010 at 4:03 AMဂျင်းနီရေ... နင့်ကို ဆော်ပလော်တီးဖို့ ကိုထွန်းထွန်းကြီး လာလိမ့်မယ်။ ကလွိကလွိReplyDeleteပွကြီးSeptember 24, 2010 at 4:08 AM"ကောင်မ တော်တော်ကဲနေလို့...ငါလာရင်တွေ့မယ်လို့" ကိုထွန်းထွန်းက ပြောခိုင်းလိုက်တယ်။(comment အစားတင်ပေးပါသည်):PReplyDeletemyatSeptember 24, 2010 at 8:41 AMအဲလိုကြီးဝတ်မနေပါနဲ့...ပိုက်ဆံကုန်တယ်သိလား...ဘာမှကိုဝတ်မနေနဲ့တော့...ပိုးစိုးပက်စက်ကိုဖော်ချင်နေတယ်....မြန်မာဖြစ်ပြီး ရွံစရာကောင်းတယ်သိလား.. :(ReplyDeletemgSeptember 24, 2010 at 11:18 AMမြန်မာမလေးတွေ တိုးတတ်လာပြီ...အခြား နိုင်ငံတကာနည်းတူ လူနေမှုအဆင့်တန်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မားမှု တွေးခေါ်မှု တွေတော့မဟုတ်ဘူး ပေါက်လို့ပဲစား တဏှာရာဂကိုပဲ လုပ်တတ်တဲ့ နုိ့ကြီးမှု ဖင်ပေါ် ခေါင်းပေါ်အောင် လုပ်တတ်လာမှုတွေပါပဲ...စိတ်ပျက်စရာပါပဲReplyDeletetommySeptember 24, 2010 at 10:44 PMရွာသားရေ !သူကြီးအတွက်မဖယ်ခင်လေး ကျွန်အရင်နှိုက်မြည်းကြည်.မယ်နော်  ရှလွှတ် :PReplyDeletenaySeptember 30, 2010 at 8:04 AMi want fuck pussy and anal.ReplyDeletewaiSeptember 30, 2010 at 8:25 AMhinnn!!! myin young nat pi.bel tu lat chatayin mi' ma le` ma ti' boo!!!!!!!!!!!ReplyDeletenayOctober 1, 2010 at 9:34 AMှအိုးကတော့ အားရစရာကြီးနော်....ဆွဲလိုက်လို့ကတော့ကွာ...ဟင်းဟင်းReplyDeletethan htikeOctober 4, 2010 at 4:21 AMya.. i want to lick pussy man.. ohhh yahReplyDeletethan htikeOctober 4, 2010 at 4:24 AMnow adays, all myanmar models are look like porn stars..... like girl in fucking flim inside.. ya really... see good, make me feel hot ......ohhh yaaaaa.....ReplyDeleteလ၊ဝ်ပိူင်းOctober 4, 2010 at 8:31 AMoh it's so exiting to look .but didn't made me hot .ReplyDeleteTawOctober 10, 2010 at 10:19 PMYou dance,you body I'm so like.ReplyDeleteChocolateOctober 12, 2010 at 11:25 AMIt's her right to wear or not wear anything at all. If you did regard her like your sister, you wouldn't have said such things to her. By the way, are you wearing 'traditional costume' everyday? I'm not her fan anyway. I just wanted to post this comment when I saw some horrible messages here.ReplyDeleteko koOctober 17, 2010 at 4:41 AMchocolate.. what u think that who r u? i say fuck u, get itReplyDeletejueOctober 28, 2010 at 8:17 PMHey Ko Ko ma tar kaungWHO DO YOU THINK YOU ARE? SOME FUCKTARD? GO GET A LIFE FUCKING MALE PROSTITUTE. and no one would want to fuck u so get lost already. i agree with chocolate,it's jenny's right to wear what she wants to wear because she will be the one to suffer the consequences.ReplyDeletetOctober 29, 2010 at 6:25 AMမြန်မာအဆိုတော်တွေ အခုလိုခေတ်နဲ့အညီလိုက်ဖတ်အောင်ဝတ်တာတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ် အားပေးပါတယ် နိုင်ငံခြားကအဆိုတော်တွေကို အားပေးတာနဲ့စာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံကအဆိုတော်တွေကိုအားပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်မြန်မာဖက်ရှင်တွေတိုးတက်သထက်တိုးတက်ပါစေလို့ ကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီးကို တိုးတက်စေချင်ပါတယ်ReplyDeletesherryNovember 6, 2010 at 3:02 AMt. you are right comment.ReplyDeletemeemeeNovember 8, 2010 at 10:00 AMဟန်နွေ နင်လှလာတယ်....ReplyDeletemeemeeNovember 8, 2010 at 10:01 AMအဲလောက်ကြီးတော့လဲ မပြောပါနဲ့... ဟန်နွေက အပြင်မှာ ပိန်ပါတယ်...ReplyDeleteleeNovember 18, 2010 at 8:36 AMjenny stop your dance anybody doesn't like some one like fucking you onlyReplyDeletesoeNovember 24, 2010 at 2:04 AMခါးလေးနဲနဲသေးရင် ပိုလှမှာReplyDeletemichaelDecember 5, 2010 at 3:31 PMwoo! A good ASS!ReplyDeletepinkDecember 6, 2010 at 11:57 PMsexy,,ReplyDeletehtethtetDecember 11, 2010 at 9:20 PMtope gyi လှတယ်ဗျာရေရလည်လည်ပဲအားပေးပါတယ်ReplyDeleteကိုကိုApril 16, 2011 at 7:14 AMမိုက်တယ် ဂျင်းနီလေးကိုကြည့်ပြီး ငါးပွင့်ဆိုင် အစည်းဝေးထိုင်လိုက်တာ ၂ ချီတောင်ပီးသွားတယ် အခန်းမှာ တယောက်ထဲ၇ှိတုံးမို့ ပါ .ဟီးးးးးးးးးးReplyDeleteMg KyawApril 19, 2011 at 7:27 AMအမယ်လေး ကြည့်ရတာ တလုံးတခဲ ကြီး ရေတောင်ငတ် တယ်..ဟဲဟဲReplyDeleteJian ZhuoDecember 10, 2016 at 12:43 AMyeezy boost 350christian louboutin shoescanada goose ukfitflops sale clearancebirkenstock shoesugg bootstimberland boots outletmichael kors handbagsmichael kors outlet onlinemichael kors handbags20161210ReplyDeleteAdd commentLoad more...